Aqbaar Niyad Jab Ah: Aamir Khan Ayaa Niyada Kadilay Vidya Balan Asigoo Xanuun U Geystay Balse Sidee Kudhacday Arinkaa - Hablaha Media Network
Aqbaar Niyad Jab Ah: Aamir Khan Ayaa Niyada Kadilay Vidya Balan Asigoo Xanuun U Geystay Balse Sidee Kudhacday Arinkaa
HMN:- Vidya Balan ayaa isu diyaarineso in lasoo daayo filimkeeda Begum Jaan bishaan gudaheeda, xidigtaan ayaa filimkani door weyn ka cayaareysa sido kale waxay kuguda jirta xayeysiin u sameynta filimkaan ayado goobo iyo Show yo kala duwan ugu sameyneesa.
inta lagu guda jiray mid kamid ah xayeysiin usameynta filimkani ayaa Vidya la weydiyay hadii uujiro nolosheda qof xanuujiyay qalbiga ka dhaawacay niyad jab na ka qaaday ayadoo ka jawaab celineysa waxay tiri,” haa, dabcan wali waan xasuusta waayahifanka aan kusoo biiraya qaasatan Bollywoodka iyo maalmihii koowaad ba.
waxaa dhacday in aan ka qeyb galo tacsi kadhacday qof kamid ahaa Bollywoodka gurigiisa, intaa kadib wmarkaa tagay waxaa igusoo dideen dhamaan sawir qaadayasha ayagoo sawiro igu bilaaway inee iga qaatan, inkastoo xiligaas aan haaa atariisho kali ah misane sidhaqsi ah heer sare ku gaartay.
waxyar kadib waxaa soogalay Super Star Aamir Khan dhamaan wixii sawir qaado ahaa halmar ayee ku dideen xidigaas xataa aniga ayaaba la i ridi lahaa, runtii aadbaan oga gubtay arinkaas sikastee ahaataba markaan guriga tagay ayaan dhamaan familka ushegay arinkaas anigoo nooc kale ah oo karkaraayo.
kadib waan isdajiyay kaligey anigoo qolkeyga kujira waxaana iska dhaadhiciyay in Aamir yahay xidig weyn oona mudan darajadaas iyo mid ka weynba anigana aan ahay qof hada mesha kucusub eysan fiicnen inaan ka xanaaqo waxyaabahas, waayo Aamir waa xidig aniga aanan gaari karin oo iga caansa.”
Vidya qalbi ahaan wey ka maseertay weyna ka xanunsatay Aamir balse hadana way garatay in Aamir yahaya xidig weyn taasina waa mid kamid ah taariikhdi kudhacday Vidya.